Casharrada: Naqshadeynta Calaamadaha Nooca Tim Burton ee AI (2) | Abuurista khadka tooska ah
Qaybtan labaad waxaan ku dhammaystiri doonnaa astaamaha wajiga ee sawirkeenna qaabka Tim Burton. Waxaan ka shaqeyn doonnaa indhaha, sanka iyo afka. Waan sii wadaynaa!
Waxa xiga ayaa noqon doona in la abuuro hoos cusub iyada oo loo marayo aaladda qalinka, waxaan siin doonnaa qaabka soo socda. Waxaan mar kale ka buuxin doonnaa xariijin toosan iyo jaantus ah oo ka soo baxda midab cad illaa midab madow oo aan ku dabaqno qaab isku dhaf ah. Marka xigta waanu nuqufin doonaa qaabkan (a Ctrl + C iyo a C + F, Si aad ugu dhejiso hore). Waxaan ku ciyaari karnaa mugdiga mid ka mid ah labada si loo abuuro qoto dheer iyo xaqiiqda baalashaas. Hubso in qaabka kore u dhigmayo hooska hayaa isha oo dhan, tani waxay siin doontaa qoto dheer.
Hambalyo, waxaad sameysay aasaaska isha koowaad! Sifiican ayaan usameynaa. Si loo sameeyo isku mid isku mid ah aagga saxda ah oo markaa abuuraya il la mid ah, waxaan dooran doonnaa dhammaan lakabyada iyo walxaha isha. Markaad iyaga doorato waxaan gujin doonnaa liiska shay> koox si ay uga tarjumaan kooxdan canaasiirta ah. Xusuusnow inaad ku heli kartid xulashada kooxda furaha O, ama badhanka hoos-u-dhaca ee laga helo aaladda wareega. Marka daaqadda pop-up soo muuqato waxaan u dhaqaajin doonnaa ikhtiyaarka ah "Qaado dhidibka taagan" oo waxaan ku xaqiijin doonaa badhanka "nuqul»Waxaana daneyneynaa inaan sameysano mid lamid ah oo aan aheyn meesha isha asalka ah. Marka tan la dhammeeyo, waxaan ku jiidi doonnaa nuqulka cusub aagga na daneynaya tilmaamaha madow.
Marka xigta waxaan abuuri doonaa hooska xitaa ka sii weyn isha. Waxaan soo laba jibaareynaa midka jira waxaanna dhigeynaa culeys sida kan aad sawirka ku aragtaan. Midabka buluuga ah waa inuu noqdaa mid cad, waa inaan ka dhignaa isweydaarsigaas mid fudud.
Sidaad u aragto, waxaan u beddelay midabka maqaarka mid fudud, maskaxda ku hay inaad wax ka beddeli karto tan markii aad ka farxiso laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad go'aansato, isku darka ugu fiican ayaa noqon doona. Waxaan bilaabi doonnaa inaan shaqeyno sanka, waxaan dhisi doonaa buundada sanka si wajiga loo siiyo qoto dheer iyo firfircoonaan. Si tan loo sameeyo waxaan ku abuuri doonnaa qalin saddex xagal ah waxaanna ka buuxin doonnaa wejigiisa ka bilaabmaya hufnaan iyo caddaan. Waxaan abuuri doonnaa qaab la mid ah laakiin cabirro yar yar ka ah bartamaha oo waxaan siin doonnaa wax yar oo fudud.
Si loo abuuro qaabka sanka waxaan iska fogeyn doonnaa naqshadda naqshadeynta lafteeda ay na keeneyso. Waxaan raaci doonnaa isla nidaamka sida wajiga, waxaan marka hore ka shaqeyn doonnaa muuqaalkiisa ama nuskiis qalabka qalinka. Waxaan u adeegsan doonnaa darbi jiifka toosan si aan u buuxino taas oo ka sii socota mid ka mid fudud una gudubta midka madow. Mar alla markii aan ku faraxno qaabkan waan ku soo laba-jibaareynaa iyadoo aan qaadanayno dhidibka taagan aaladda Milicsiga (O) oo waxaan ku biireynaa laba qaab oo leh a Wareejinta + Ctrl + J taxaddar inaadan u dhaafin meel u dhexeysa labada cunsur ama midba midka kale ka dusho.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la abuuro aagag hooska ah oo ku yaal dhinacyada sanka si loo xoojiyo dareenkaas mugga iyo qoto dheer. Waxaan ku abuuri doonnaa aaladda qalinka qaab saddexagal leh sida kan aan aragno. Qaabkan gudahiisa waxaan ku abuuri doonnaa wejiyada ka soo horjeedka wejigiisa ku dhaca sanka. Marka xigta waxaan qaadi doonnaa isla nidaamkaas. Muraayad> Muraayad leh dhidib taagan> Nuqulr.
Waxa xigi wuxuu noqon doonaa in la abuuro hanaan isku mid ah si loo abuuro qaabka sanka dulalka. Marka laga hadlayo gradient-ka qaabkan, waxay la mid noqon doontaa tii aan u isticmaalnay dhinacyada sanka, taas oo ah, midab buluug ah oo ka fudud aagga sare iyo midab madow oo ka jira aagga hoose. Sidoo kale, waxaan ku milicsan doonnaa aaladda Muraayad> Muraayad leh dhidibka taagan> Nuqul.
Si loo abuuro bushimaha waxaan ku abuuri doonnaa qaabka soo socda aaladda qalinka, iyada oo aan lahayn midab buuxa, kaliya wadada qaabkan ayaan si fiican u arki doonnaa qaabka aan abuureyno Marka qaabkan la abuuro, waxaan ka buuxin doonnaa wejigooda toosan oo leh midabada ka muuqda sawirka. Marka tan la sameeyo, waxaan isticmaali doonaa burushka qiiqaya waxaanna sameyn doonnaa waddo aan labadaas bushimood ugu kala qaybinno laba qaybood. Waxaan aadi doonnaa dariiqa dariiqa oo waxaan dooran doonaa aaladda wax soosaarka si bushimaha ay u sii ahaadaan kuwo madaxbannaan oo wax yar ayaan mid kale ku dul fuulaynaa.
Ugu dambayn, waxaannu hal-abuur ku samayn doonnaa faruuryaha hoose iyadoo la raacayo isla farsamadii aannu u isticmaalnay dhalaalka isha. Waxaan abuuri doonnaa qaab u eg kan aan aragno oo waxaan ka buuxin doonnaa wehliyaha dariiqa ka socda oo ka socda caddaan illaa madow oo adeegsanaya a qaabka isku dhafka raster.
Iyo sidoo kale, illaa halkan waxaan ku arki doonnaa qaybtan labaad. Waxaan horey u abuurnay muuqaalada wajiga! Sax ma tahay? Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah, ha ka waaban inaad su'aalahaaga ku soo gudbiso faallooyinka;)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Casharbarka: Naqshadeynta Calaamadaha Tim Burton ee AI (2)